Kiiska maqaarka ugu fiican ee Samsung galaxy tab a 10.1 2019 loogu talagalay Lenovo tab M10 oo lagu daray kiniinka daboolka Soo saaraha iyo Warshadda | Socodka
Istaag kiiska maqaarka ee Samsung galaxy tab a 10.1 2019 ee Lenovo tab M10 oo lagu daray daboolka kiniinka
Naqshadaynta naqshadda casriga ah ee adn
leh dhisme adag iyo naqshad taagan oo isku laaban, Ku dar gadaasha waxqabadka Magnetic, daboolka ayaa gadaal u laabaya gadaalna ka xaqiijinaya kiiska, Markaad akhriska taagan tahay, waxay hubin doontaa in qalabka kiniinku uusan janjeerin.
Hurdo JOOJI / Toos
Si otomatig ah ayuu u toosiyaa ama u dhigaa kaniinigaaga hurdo marka daboolka la furo lana xiro, Si loo badbaadiyo awooda loona kordhiyo waqtiga wax aqrinta si wax ku ool ah.
Markuu daboolka u dhowaado dhinaca shaashadda kaniiniga, kaniinku wuu seexan doonaa.
Kindle note: kiisku ma kici doono mana seexan doono marka kiniinku uusan taageerin shaqada.
Kiiska dhabarka adag ee naxdinta leh si uu kiniinkaaga uga ilaaliyo argagaxa iyo dhibcaha. Daboolka jilicsan ee microfiber-ka ee gudaha daboolka hore si looga hortago xoqida shaashadda waxyeelada kale ee maalinlaha ah.
Qalabka magnetic wuxuu xajinayaa kaniinigaaga si ammaan ah inta uu socdo. Waxay hubisaa in daboolka si ammaan ah loo xiray, wuxuu hubiyaa in Qalabkaaga si wanaagsan loo ilaalin karo. Si wax ku ool ah looga fogaado ka hortagga furitaanka shilka ah ee daboolka xiritaanka xoqida qalabka. Waxay ka ilaalisaa qalabkaaga dhammaan jihooyinka.
Goynta saxda ah
Oggolaanshaha marinka fudud ee dhammaan dekeddaha, dareemayaasha, sameecadaha, kamaradaha iyada oo aan laga saarin kiiska.
Waad ka qaadi kartaa, isticmaal taleefanka dhegaha iyo kamaradda kiiska, uma baahnid inaad ka saarto.
XULAN caymiska Maaddooyinka
daboolku wuxuu ka samaysan yahay maqaar macmal ah oo loo yaqaan 'Premium synthetic skin' oo dibedda si fiican uga ilaaliya aaladda, xaglaha microfiber ee jilicsan iyo PC adag ama qolof TPU jilicsan ayaa kiniinigaaga ka ilaaliya naxdinta, saamaynta, dhibcaha shilalka ah, iyo xoqista maalin kasta.
Xaglo Muuqaallo badan
Goolal kala duwan oo badan ayaa awood u leh inay dejiyaan xaglo isle'eg oo isle'eg; Kiniinigaagu wuxuu istaagi karaa muujinta iyo qorista xaglaha; Waxaad hagaajin kartaa xaglaha sidaad doonto.
Waxyaabaha: maqaarka PU iyo microfiber
Qolofta gadaal: PC adag (ku soo dhawow baaritaanka jilicsan ee qolofka TPU)
Feature: Istaag kiiska laalaabka maqaarka PU
Midabka: Madow, buluug mugdi ah, bunni, xariir daabacan, iyo midab kale oo OEM / ODM ah
OEM / ODM: Aqbal
Hawsha: hurdo otomaatig ah iyo toos (marka laga reebo kaniiniga ma lahan shaqadan)
Qalin-hayaha: OEM / ODM
Qaybaha Magnetic: Haa
Cabbirka: 16.8 * 24.3 * 1 (cm)
Xaaladaha kiniiniga ah ee soo socda ayaa la heli karaa. Kiisaska kale ee kiniiniga ah waa kuwo la aqbali karo OEM / ODM.
iPad 10.2 2020 jiilkii 8aad
Tusaale: A2270, A2428, A2429, A2430;
iPad 10.2 2019 qarnigii 7aad
Tusaale: A2197, A2200, A2198
Wixii Samsung ah
Galaxy Tab A7 10.4 "(2020) Tusaale: SM-T500 SM-505
Galaxy Tab S7 11 "(2020) Tusaale: SM-T875 SM-870
Galaxy tab S6 Lite 10.4 "2020 Tusaale: SM-P610 SM-P615
Galaxy Tab S6 10.5 2019 Tusaale: SM-T860 SM-T865
Galaxy Tab A 8.0 T200 / 205 (2019) Tusaale: SM-T290 SM-295 SM-297
Galaxy Tab A 10.1 (2019) Tusaale: SM-T510 SM-T515
Galaxy Tab 10.5 S5E (2019) Tusaale: SM-T720 SM-T725
Wixii Lenovo ah
Tabada Lenovo M10 PLUS 10.3 2020 Model: TB-X606X TB-X606F
Lenovo tab M10 10.1 2019 Model: TB-X605F TB-X605L
Lenovo M10 HD X306F 10.1 2020 Tusaale: TB-X306
Huawei matepad 10.4 2020 Tusaale: BAH3-W09 BAH3-AL00
Huawei mediapad T10s / T10 Tusaale: AGS3-L09 / W09 AGR-L09 / W09
Huawei Mediapad M6 10.8 Tusaale: SCM-AL09 SCM-W09
Huawei matepad Pro 10.8 Model: MRX-W09 / W19, MRX-AL09 / AL19
Hore: 360 wareega kiis culus culus Shockproof Rugged Case for ipad for Samsung for Lenovo tablet
Xiga: Istaag kiiska maqaarka ee ipad-ka loogu talagalay Samsung ee kiniiniga Lenovo oo leh suunka gacanta oo haysta qalin qalin leh
U istaag kiiska maqaarka kiniinka
Slim taagan folio kiiska for ipad mini 6 Smart lea ...
Kiis Naxdin leh oo leh Transparent Transparent Back For ...
Slim Slim Shockproof Gawaarida Gawaarida ipad for Samsun ...